Caancala Dhangeessi - Keewwata - Yaa'insa Barruu jedhu filadhu
Caancala Gulaali - Barbaadii Bakka Buusi - Dhangeessi - Yaa'insa Barruu jedhu filadhu
Galmeewwan barruutiif dirqalawwan murfisaa ifteessi.
Keewwata tokko keessatti murfisa bakka barbaachisuutti ofumaan saaga.
Arfiiwwan sarara xumuraatti
Lakkoofsa gadee kan arfiiwwan isa xumura sararaa gidduutti dhiistu, murfisichaan duratti akka saagamu galchi.
Arfiiwwan sarara jalqabaatti
Lakkoofsa gadee kan arfiiwwan isa jalqaba sarara, murfisichaan booda akka mul'achuu qabu galchi.
Lak. olaantee kan murfiwwan irraa jalaa
Lakkoofsa gadee kan sararawwan walitti aanan isa murfisamuu danda'uu galchi.
Dirqalaawwan xumuura fuulaa yk tarjaa ifteessi.
Sanduuqa filannoo kana filadhu, kana boosa akaakuu qarxi isa fayyadamuudhaaf barbaaddu filadhu.
Akaakuu qarxi isa saaguudhaaf barbaaddu filadhu.
Bakka qurxiinsa itti saaguudhaaf barbaaddu filadhu.
Haalata Fuulaa Waliin
Akaakuu dhangeessuu isa qarxii booda fuula jalqaba irratti fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Dirqalaawwan yaa'insa barruu isa duraa fi booda xumura fuulatti keewwatootaaf ba'u ifteessi.
Keewwata addaan hinbaasin
Eerga qarxiin saagamee booda, keewwata guutumaa gara fuula ittaanuu yk tarjaatti jijjiira.
Keewwata ittaanuu irra kaa'i
Yammuu qurxiinsi tokko yk muraa tarjaa saagamu, keewwata ammaatiif keewwata ittaanan waltti-qabee kaa'a.
Lakkoofsa liillee sararawwanii keewwata tokko keessaa, xumura fuulaa tokkoo dura ifteessa. Sanduuqa filannoo kana filadhuutii, kana booda sanduuqa Sararoota keessatti lakkoofsa tokko galchi. Yoo lakkoofsii sararoota dhuma fuulaa irraa sanduuqa Sararoota keessatti ifta'ee gad yoo tahe, keewwatichi gara fuula ittaanuutti darba.
Lakkoofsa liillee sararawwanii keewwata tokko keessaa, xumura fuulaa tokkoo dura ifteessa. Sanduuqa filannoo kana filadhuutii, kana booda sanduuqa Sararoota keessatti lakkoofsa tokko galchi. Yoo lakkoofsii sararoota dhuma fuulaa irraa sanduuqa Sararoota keessatti ifta'ee gad yoo tahe, dirqalii qurxiinsaa nimijaa'u.
Title is: Yaa'insa Barruu